रेसुङा पर्यटनको गन्तब्य – केबी मसाल
रेसुङा पर्यटनको गन्तब्य
August 18, 2017 September 4, 2017 KB Mashal0Comment
पर्यटन शब्दको शाब्दीक अर्थ भ्रमण हो । एक स्थलबाट अर्को स्थलहरुमा गरिने भ्रमणलाई पर्यटन भनिन्छ । आजभोली हामी धेरैको भ्रमण गर्ने सस्कृतिको विकास भएको छ । यो राम्रो पक्ष मान्नु पर्दछ । तर कुन स्थानको भ्रमणले के कुरामा अध्यन र अवलोकन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । हामी मध्य धेरै पर्यटकहरुले भ्रमणमा संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परा, रहन सहनको अध्ययन गर्न रुचाउछौ । कतिपयले धार्मीक स्थलहरुको अवलोकन र दर्शन गर्ने इच्छा पनि लिएका हुन्छन ।
नेपालमा पर्यटकहरुको लागी भ्रमण गर्ने धेरै स्थलहरु भएपनि अधिकाशं स्थलहरुमा पुग्न पर्यटकहरुलाई समस्या छ । अर्को तर्फ सबैस्थान को बारेमा पर्यटकहरुलाई प्रचार प्रसारको अभाव रहेको छ । प्रदेश नंं ५ मा पर्ने गुल्मीको रेसुङा आध्यात्मिक तपोभूमि हो । त्यस क्षेत्रमा धेरै ऋषि महर्षिहरुले तपस्या गरेका छन । विभाण्डक ऋषिका छोरा ऋष्यशृङगले तपस्या गरेको ठाउँनै गुल्मीको रेसुङा हो । त्यसैले रेसुङालाई आध्यात्मिक र धार्मिक तपोभूमि भनिन्छ । पहिलो पटक रेसुङा पुगेका पर्यटकहरु यज्ञशालामा हुने नित्य पूजा र हवन, चुचरोमा सिद्धस्थान, स्वच्छ हावापानी, सुन्दर पहाडका चुचुराहरु र वरिपरिको मनोरम दृष्य हेर्दै रमाउछन ।
रेसुङाको तपोभूमि ऐतिहासिक स्थल हो । स्वामी शशिधर, लक्ष्मीनारायण तथा यदुकानन्दको तपोभूमि रेसुङामा धार्मीक मठ मन्दिरहरु, प्यागोडा शैलिमा निर्माण गरिएको यज्ञशाला, होमकुण्ड, शिवलिङग जस्ता धार्मीक महत्वले रेसुङाको ऐतिहासिक धार्मीक महत्व बढाएको छ । अयोध्याका राजा दशरथलाई पुत्रलाभ गराउने थलो र भगवान रामले बाण हानेर पानी निकालेको कुँवासँग पनि रेसुङाको धार्मिक आस्था र प्राचिनता जोडिएको छ । रेसुङामा श्रीरामले बाण हानेर पानी निकालेको पोखरी अहिले पनि देख्न सकिन्छ । जुन हिउदमा पनि सुक्दैन र बर्षायाममा पनि बगेर जादैन ।
रेसुङा पुगेपछि पर्यटकहरुको पहिलो रोजाइ भ्यूटावर पर्दछ । भ्युटारमा चढेपछि चारैतिरको दृष्यले पर्यटकहरु आनन्द मान्दछन । धार्मीक आस्थाका पर्यटकहरुलाई दर्शन गर्न रेसुङामा विष्णुपादुका, शिवालय, राधाकृष्ण मन्दिर, गरुडस्थान, पोखरी, पाटी पौवा, धर्मशाला, गौशाला आदि रहेका छन् । रेसुङा पुगेपछि प्राकृतिक दृष्यावलोकन गर्न रुचाउनेहरुको लागी रेसुङाको परिसरबाटनै धेरै स्थानको अवलोकन गर्न सकिन्छ । रेसुङा बाट गुल्मी मात्र होइन पाल्पा,स्याङजा र अर्घाखाची र बाग्लुङ जिल्लाको विभिन्न ऐतिहासिक सम्पदा र प्राकृतीक स्थलहरुको अवलोकन गर्न सकिन्छ । साथै धौलागिरी, निलगिरी, माछापुच्छे र अन्य १५ भन्दा धेरै हिमाल एवं रमणिय हिम श्रृखंलाहरु पनि रेसुङा तपोभूमी बाट दृष्यावलोकन गर्न सकिन्छ ।
गुल्मी सदरमुकाम तम्घासबाट ७ किलोमिटर रमणिय पहाडी श्रृखलाको ग्राभेल मोटरबाटो हुदै रेसुङा तपोभूमी पुग्न सकिन्छ । समुन्द्र सतहबाट २ हजार तीन सय ४७ मिटरको उचाइमा रहेको रेसुङा तपोभूमी मात्र नभएर जैविक विविधताले पनि भरिपूर्ण क्षेत्र हो । तम्घासबाट रेसुङा मोटरमार्ग निमार्ण भएपछि आजभोली रेसुङा पुग्ने पर्यटकहरुको सख्या बढन थालेको छ । विशेष गरी वाह्य पर्यटकहरु भन्दा पनि ग्रामीण पर्यटकहरु रेसुङा पुग्ने गर्दछन । रेसुङामा श्रावर्ण महिनाभर धार्मीक पर्यटक अर्थात दर्शनार्थीहरुको घुइँचो हुने गर्दछ । रेसुङामा रहेका मन्दिर र तालको दर्शन, पूजा र स्नान गर्ने हो भने सम्पूर्ण मनोकामना पूरा हुन्छ भन्ने जनविश्वास छ ।
आजभोली रेसुङामा धार्मीक र प्रकृति प्रेमी मात्र होइन कलाकार र शैक्षिक भ्रमणका टोली, संघ÷सस्थाका भ्रमण टोलीहरु गुल्मी पुगे पछि रेसुङाको भ्रमण धेरैले गर्ने गर्दछन । धेरै कलाकारहरले रेसुङालाई शब्द चित्रण गरि कथा र गितका एल्वमहरु निकालेका छन । कतिपय कलाकारहरुले छायाकंनको लागी रेसुङा तपोभूमीलाई नै रोज्ने गरेका छन । रेसुङा जानको लागी सार्वजनीक यातायातको पनि सुविधा छ । बुटवल, तानसेनबाट तम्घास सम्म बसबाट यात्रा गर्न सकिन्छ । तम्घासबाट रेसुङा पुग्नको लागी साना गाडीहरु पाइन्छ । तपाई संग आफ्नो साधन भए रेसुङ जानको लागी बलेरो, टाटासुमो र स्कारपियो जस्ता गाडी हुन जरुरी छ । रेसुङा जादा बाटोमा खान बस्न कुनै कठिनाइ हुदैन । सामान्य चियाँ नास्ता खाने देखि बास बस्नको लागी समेत होटलहरु पाइछ ।
गुल्मी पुगेपछि पर्यटकहरुलाई आफ्नो समय भए भ्रमण गर्न पर्ने स्थलहरु धेरै छन । पहाडी जिल्लामा गुल्मी रमणिय जिल्ला मानिन्छ । रिडिखोला र कालीगण्कीको संगम स्थल रिडि वजार, थाप्लेलेक,धार दिने गुफा जस्ता रमणिय स्थलहरु गुल्मीमा पर्दछन । यो बाहेक भ्रमणको लागी इस्मा, धुर्कोट, चारपाला, बलेटक्सार, पुर्कोट, जस्ता ऐतिहासिक स्थल पनि छन । मदानेको लेख, लुम्पेकको लेक, वामीको लेक, अग्लुङको लेक, रानीवन, सिद्धबाबाको डाँडा जस्ता प्राकृतिक स्थलहरु भ्रमण र अवलोकन गर्न सकिन्छ । हराबरा पहाडको दृष्य, समथर खोला र नदी किनारका खेतीयोग्य बेसी,पहाड बाट बग्दै गरेका झरना, दरम खोला, रिडीखोला, हुग्दीखोलाले गुल्मीको जमिन सिन्चीत भएको छ । छल्दीखोला, निस्तीखोला र पनाहखोला मिलेर बनेको बडिगाड खोलाले जमिनलाई हरावरा बनाएको छ । यस्ता प्राकृतिक मनोरम दृष्य अवलोकन गर्न रेसुङाबाट ग्रामीण क्षेत्रमा भ्रमण गर्नु पर्दछ ।
जिल्लाको सदरमुकाम तम्घास मात्र होइन अधिकाशं ऐतिहासिक, धार्मीक र प्राकृतीक स्थलहरुमा सडक यातायात पुगि सकेको छ । तर यी सडक अधिकाशं ग्रोभल र कच्ची छन । गुल्मीमा पर्यटकहरुलाई भ्रमण गर्नको लागी उपयुक्त समय हिउदको महिना राम्रो हुन्छ । कालीगण्डकीको किनारै किनार रिडीबाट रुद्रवेणि र गुल्मी, पर्वत र स्याङजा जिल्लाको संगम स्थल सेतीवेणि मोटरबाटनै पुग्न सकिन्छ । सेतिवेणि धार्मीक पर्यटकहरुको लागी महत्वपूर्ण दर्शन योग्यस्थल हो । रुद्रवेनीबाट बडिगाड खोलाको किनारै किनार ढोरपाटन पुग्ने मोटरमार्ग खुलेको छ । आफ्नो साधन हुने पर्यटकहरुले बडिगाड खोलाको नागवेली दृष्य गुल्मी र वाग्लुङ जिल्लाका अनगिन्ती गाउँहरुको अवलोकन गर्न समेत सक्दछन । माच्छाको स्वादका पारखीहरुको लागी बडिगाडको माच्छा प्रख्यात छ । गूल्मी ग्रामीण क्षेत्रमा पहाडी मुलका प्राय सवै जाती र जनजातीको वसोवास छ । बोल्दाखेरी अधिकाशं शब्दको अगाडी, पछाडी पार लागाएर बोलीने गुल्मेली भाषा नयाँ पर्यटकहरुको लागी मिठो मानिन्छ ।
रेसुङ भ्रमणमा जादा अथवा र्फकदा अध्यन, अवलोकन र दर्शन गर्ने स्थल रिडि हो । गुल्मी, पाल्पा र स्याङजा जिल्लाको संगम स्थलमा रिडी पर्दछ । रिडी जस्लाई रुरु क्षेत्र पनि भनिन्छ । नेपालको चारधाम मध्यको एक धाम रिडीलाई मानिन्छ । जुन धामको बारेमा बराह पुराणमा समेत उल्लेख गरिएको छ । रिडीमा ऋषिकेश, भृगुतुङगेश्वर, रुरु कन्या, गल्फु वडार, आनन्दकुटी गुफा, तालदोभान गुफा लगाएत दर्जनौ मठ मन्दिर,पाटी पौवा र धार्मीक आस्था संग जोडिएका स्थल रहेका छन । रुरु क्षेत्रमा साना ठूला गरेर १ सय भन्दा बढि मन्दिर तथा साना ठूला केहि गुफा पनि छन । जंहा अहिलेसम्म पनि दैनिक पूजा आजा गरिन्छ । धेरै गुफाहरुमा शिब ध्वनी जगाउने गरिएको छ । रिडीमा मुख्य गरि माघेसक्राान्तीमा तीन दिन र ऋशिकेश उत्सब २ दिन ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ । साथै बर्ष भरीको औंशी, पुर्णिमा, ग्रहण तथा बैशाख महिनाको प्रत्येक शनिबार मेला लाग्ने गर्दछ । एकादशी, औशि, पूर्णिमा तथा हिन्दु परामपरा अनुसारका बिभिन्न पर्वमा धार्मीक पर्यटकहरु को भिड लाग्ने गर्दछ । रिडी घाटमा मानिसको शब जलाउने र टाढाका मानिसहरुले अस्तु सेलाउने पनि गर्दछन । जुन स्थान अति पबित्र पनि मानिन्छ ।
रुरु क्षेत्रमा पाल्पा तर्फ ऋषीकेश मन्दिर रहेको छ । ऋषिकेशको मूर्ति पाल्पाका राजा मणि मुकुन्दसेनले कालीगण्डकीमा नुवाउदा भेटिएको हो । इतिहासमा पाल्पाली राजा मणिमुकुन्द सेन, भिमसेन थापा, जंग बहादुर राणा तथा राजामहाराजाहरुको प्रमुख गन्तब्य रहेको पाइन्छ । साथै भिमसेन थापाले यो ठाउमा एउटा मन्दिर र पौवा समेत बनाएका छन । बिक्रम संवत १९९७ सालमा तत्कालीन श्री ३ प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर राणाद्वारा निर्माण गरेको अर्गली दरबार अहिले सम्म पनि छ । जुद्ध शमशेरले आफ्नो जीबनको उत्तरार्धमा रुरुक्षेत्रमा कल्पबास बस्नको लागि यो दरबारको निर्माण गराएका थिए । यो दरबारमा बसेर उनी प्रत्येक दिन कालीगण्डकीमा स्नान गर्न जाने गर्दथिए । यी सबै स्थलहरुको दर्शन भ्रमण गर्नको लागी कम्तीमा चार घन्टाको समय निकाल्न पर्दछ ।
रेसुङा भ्रमणमा जाने पर्यटकले बाटोमा पर्ने पाल्पा तानसेन वरपरका पर्यटकियस्थल समेत अवलोकन गर्न सकिनछ । तानसेनको ऐतिहासिक वजार अग्रेज संगको लडाइमा विजयको उत्सवमा उजीर शमसेरले निर्माण गर्न लगाएका तानसेनको भगवतीको मन्दिर पर्यटकहरुलाई आकर्षण स्थल बनेको छ । खडक शमसेरद्धारा हावाखान र सैनिकहरुको जमघट गराउन वि.स. १९५० मा निर्माण गरिएको शितलपाटी र एशियाकै ठूलो मानिने काठबाट निर्मीत शितलपाटीको मुलढोका, अमरनारायण को मन्दिर, तानसेन दरवार, रानीमहल जस्ता ऐतिहासिक स्थलले पर्यटनहरुको लागी अध्ययन अनुसन्धान र दृष्यावलोकनका स्थलहरु वनेका छन ।
पश्चिम पाल्पामा पर्ने भुवनपोखरीको गोखुङगामा अवस्थित ऐतिहासिक रैनादेवी पाल्पा जिल्लाको मात्र नभएर गुल्मी र अर्घाखाची लगायतका क्षेत्रको प्रशिद्ध धार्मीक स्थल हो । तानसेन देखि ३८ कि.मि.को दुरीमा रहेको रैनादेवीको मन्दिर प्राचिन, धार्मीक, ऐतिहासिक, पर्यटकिय एवं पुरातात्विक महत्वका हिसावले प्रख्यात मानिन्छ । तानसेनबाट प्रशिद्ध भैरवस्थानको बाटो हुदै रमणिय प्राकृती दृष्यलाई अवलोकन गर्दै रैनादेवी पुग्न सकिन्छ । दसैको महाअष्ठमीको दिन मध्यरातमा गरिने कालीकाको पुजा, सोरठी नाच, सराँय, मालश्री, बालुन र ख्याली नाच यहाको प्रमुख सस्कृतीको आकर्षण मानिन्छन । तर यी सबै सास्कृतिक दृष्य हेर्न भने दसैको बेलामा पुग्न पर्दछ ।
रिडी र तानसेनको मोटरमार्गमा पर्ने भैरवस्थान तानसेनबाट ९ किलोमिटर पश्चिममा पर्दछ । भैरव मन्दिर वि.सं.१३१५ मा स्थापना गरिएको सेनकालीन मन्दिर हो । यहाँ मानो र पाथीका रोट चढाउने र दसै र विशेष पर्वमा बली चढाउनेहरुको घुइचो हुने गर्दछ । भैरस्थानमा रोट चढाउनको लागी घरबाट रोट लान नसक्नेहरुको लागी त्यहिनै रोट किन्न पाइन्छ । आजभोली भैरवलाई चढाउने रोट बनाइदिने दर्जनौ सशुक् सेवादिने पसलहरु भैरवस्थानमा छन । भैरवस्थानबाट गुल्मी, स्याङजा र पाल्पाका अनगिन्ती ग्रामीण बस्तीहरु अवलोकन गर्न सकिन्छ । मौसम सफा भउको समय भयो भने दर्जनौ हिमाल समेत भैरवस्थानबाट देख्न सकिन्छ ।
हाम्रो पर्यटन धार्मीक, प्रकृति र संस्कृतिमा आधारित छ । प्रकृति र संस्कृति ग्रामीण क्षेत्रमा नै रहेको हुन्छ । त्यसैले पनि ग्रामीण पर्यटनका सम्भावनाहरु गाउँमा नै हुन्छ । ग्रामीण पर्यटनबाट हुने आम्दानीले बिकास बाट पछाडी परेको ग्रामीण क्षेत्रको बिकास हुन्छ । ग्रामीण पर्यटन बाट आर्थिक लाभ लिन सक्ने सम्भावना धेरै रहेको हुन्छ । फुर्सदको बेला भ्रमणमा निस्कने मानिसहरु अहिले शहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्र रुचाउछन । धुवाँ, धुलो, फोहोरजस्ता प्रतिकूल वातावरणका कारण पर्यटकहरुले ग्रामीण वातावरण रुचाउन थालेका छन । पर्यटकहरुले आफ्नो आनन्द र मनोरन्जनका लागि पैसा खर्च गर्न तयार हुन्छन । पर्यटन विकासका निम्ति संस्कृति, धार्मिक र प्रकृति यी तीनओटै उत्तिकै महत्वका विषय हुन्छन । हाम्रो धर्म, संस्कृति र परम्परालाई जोगाएर राख्न सकेमा मात्र पनि ग्रामीण पर्यटनको बिकासको लागी सजिलो बातावरण बन्दछ । फुर्सदको समय मिलाएर एक पटक तानसेन, भैरस्थान, रिडी हुदै रेसुङा पुग्न सके राम्रो हुन्छ ।
यी सबै स्थान भ्रमण गर्नको लागी यातायात खर्च बाहेक दैनिक १ हजार रुपयाको खर्च राख्न पर्दछ । भ्रमण अवधि बुटवल देखि कमतीमा १ हप्ता राख्न सके राम्रो हुन्छ । वुटवल देखि पाल्पा तानसेन हुदै तम्घास सम्म ११५ कि.मि.को दुरी रहेको छ । पाल्पाको तानसेनबाट तम्घास ७५ कि.मी पर्दछ । तानेनबाट रिडी ३० कि.मी. र रिडी देखि तम्घास ४५ कि.मी.को दुरी रहेको छ । तम्घास पुगेपछि रमणिय पहाडी श्रृखलाको उकालो ७ कि.मी.ग्राभेल सडक पार गरेपछि रेसुङा तपोभूमी पुग्न सकिन्छ ।
मिती ः– २०७४ भाद्र २ गते दाङ
← श्रीकृष्णको उपदेश नै श्रीमदभगवत गीता
तीज पर्व र हाम्रो सस्कृती →